Fitsipika mahazatra any Sri Lanka ~ Journey-Assist - Import. Fanesorana. Tsy voarara.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fombafomba any Sri Lanka
Fitsipika momba ny fomba fanao any Sri Lanka. Import / export
26 Janoary, 2020
Ny fanaraha-maso ny entana amin'ny kitapo dia tena tsy misy dikany!
Avela atao manafatra sy manafatra
Inona avy ny fetra amin'ny fanafarana sy ny fanondranana?
Voarara ny manafatra / hanondrana
Import / Export. navela
navela olona tsirairay:
Omena isaky ny olona iray:
- fitaovana an-trano elektronika sy akanjo ho an'ny fampiasana manokana
- toaka ho an'ny olona mihoatra ny 18 taona: hatramin'ny siny feno 2 tavoahangy ary misy toaka mahery 1,5 litatra
- menaka manitra: eau de toilette hatramin'ny 250ml ka hatramin'ny menaka manitra hatramin'ny 60g
- souvenir, ny sandan'ny vola tsy mihoatra ny $ 250 fa tsy amidy
- vola vahiny - tsy misy 5000 $.
- volam-pirenena any Sri Lanka - tsy mihoatra ny 5000 rupiah
- sigara elektronika. Ny fampiasana dia avela any amin'ny toerana imasom-bahoaka, saingy ny famokarana sy ny fanafarana miaraka amin'ny varotra varotra manaraka dia voarara
- Ny sary sy ny horonan-tsary quadrocopter dia natao ho an'ny tena manokana. Ho an'ny fampiasana ara-dalàna ny drone dia mila misoratra anarana ianao ary mandoa alàlana. Na izany aza, ny fandefasana drones dia ampiharina mandritra ny fotoana voafetra ny daty 21.04.2019/XNUMX/XNUMX.
- vola sandry kely noho ny sandry nafarana
- voankazo hohanina manokana, fa ao anaty entana kosa. Ny voankazo dia tsy navela hanondrana entana am-paosy, fa raha ny marina dia matetika tsy misy mahita lesoka
- dite, tsy mihoatra ny 2 kg isaky ny olona iray
- ny sandam-pirenena any Sri Lanka dia mety ho 5000rup
- souvenir tsy mendrika mihoatra ny $ 250 isaky ny olona. Tsara ho anao ny manana vola fandraisana vola aminao.
- hatramin'ny 3l ny alikaola
Ny entana rehetra mitondra amin'ny habetsaky ny filan'ny tena manokana (bebe kokoa eto), tsy maintsy ambara ho fifanekena ara-barotra. Raha fantatrao ny fanomezana ny entana ara-barotra, tsy maintsy mandoa lamandy ianao.
Import / Export. fameperana
voafetra ho fanafarana:
voafetra ho fanondrana:
ilaina ahazoana alalana, amin'ny tranga sasany, alohan'ny dia:
ilaina ahazoana alalana:
- fanafody sy fanafody ho an'ny tena manokana (raha misy fanafody)
- entana ho an'ny tanjona ara-barotra na varotra, ankoatra ireo santionany amin'ny varotra
- zavamaniry, voankazo, akorandriaka, bibidia, vorona ary vokatra avy amin'izy ireo
- biby fiompy (misimisy kokoa amin'ny pejinay)
- dite, mihoatra ny 2 kg isaky ny olona
- entana ho an'ny tanjona ara-barotra sy varotra, afa-tsy amin'ny santionany amin'ny varotra
- zavamaniry (karazana 450 mahery), akorandriaka, bibidia, vorona ary vokatra avy amin'izy ireo
To be fanambarana:
- vola vahiny, ny vola izay mihoatra noho ny na mitovy 15000 $, koa raha ny habetsan'ny fanafarana dia mihoatra na mitovy 5000 $raha mikasa ny hitondra azy hiala izy
- firavaka sy firavaka sarobidy
- sigara sy vokatra paraky. Ilaina koa ny fandoavana sarany. Ny tahan'ny adidy amin'ny sigara samy hafa habe, ho an'ny sigara sy sigara dia mety miovaova. Raha mila fanazavana fanampiny Tranokala Sri Lanka Customs.
Na eo aza ny fandraràna ankehitriny ny fanafarana ny vokatra paraky, mazàna, ny entana akory dia tsy asiana fisavana. Raha mandritra ny fikarohana ianao dia mahita sigara 200, ny vokatra dia azo alaina tsy misy lamandy. Raha mihoatra ny 1 sakana, fa tsy mihoatra ny 5 sakana - dia tsy maintsy miantoka adidy amin'ny fanafarana ny vokatra misy paraky ianao. Sokajy 5 mahery - ny fifehezana ny fomba amam-panao dia mety hanaiky ny fety ho toy ny contraband, miaraka amin'ny fandroahana entana sy ny fametrahana onitra amin'ny mpandika lalàna.
Ho an'ny fanafarana ara-barotra na manondrana any Sri Lanka amin'ny akora vita amin'ny sigara na vokatra vita amin'ny sigara vita (sigara, sigara, sigara fantsona, sns), dia takiana ny fanamarinana fisoratana anarana navoakan'ny Departemantan'ny Excise.
- vola vahiny amin'ny vola lehibe kokoa na mitovy 5000 $raha maka azy io
- fanafody sy fanafody tsy natao ho an'ny tena manokana
Import / Export. Efa voarara
Voarara ny manafatra:
Voarara ny manondrana:
- fanafody sy fanafody psychotropic
- fanafody (afa-tsy izay natao ho an'ny tena manokana)
- fitaovana fampielezan-kevitra sy sary vetaveta
- fitaovana manafintohina amin'ny fivavahana
- vola Indiana sy Pakistaney
- basy sy vy mangatsiaka, amam-basy, manindrona sy manapaka zavatra, mirehitra ary zavatra mipoaka
- antikantika sy antikristy, mihoatra ny 50 taona (saron-tava, sora-tanana amin'ny ravina palmie, fanangonana vola sy hajia, sns), raha tsy mahazo alalana avy amin'ny mpitarika ny Archives Nasionaly sy ny Tale jeneralin'ny departemantan'i Arkeolojia any Sri Lanka
- boky tsy fahita firy
- Vatosoa sarobidy sy tsy voatazona vato, koa metaly sarobidy ao anaty endrika ingots
- biby sy zavamaniry (karazany 450 mahery)
- vokatra ivoara
- dite, mihoatra ny 10 kg
- voankazo (durian, noho ny fofona mahery sy ny voaniho - tsy hita amin'ny alàlan'ny scanner)
- zava-mahadomelina sy mahery
- pôrnôgrafia sy fampielezan-kevitra
- mipoaka, basy, bala, basy ary manapaka zavatra, narkotika sy psychotropic, singa azo entina mirehitra
Ny saram-piaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Sri Lanka dia tsy voampanga.
Misaotra ny mpanoratra tamin'ny valiny momba ilay lohahevitra!